Hay’adda Ka Hortagga Masiibooyinka iyo Kaydka Raashinka Qaranka oo Raashin U Qaybisay Kumannaan Qoys | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Caynaba (SDWO): Guddoomiye ku-xigeenka Hay’adda ka hor tagga Masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Aw-Jaamac Xiris,ayaa sheegay in hay’addoodu gobolada bari iyo galbeed ee dalkaba in ay ka bilawday qaybinta raashin loogu talo galay inla ghaadhsiiyo dadkii duufaantu ku dhufatay ee gobolada galbeedka Somaliland.
Dadkii baro kacayaasha ahaa ee xooluhu kabexeen ee ku noolaa gobolada bari ee dalka gaar ahaan Saraar iyo Sooloo uu sheegay in ay aad u jilicsan yihiin xilliga ramadaantana ay u baahan yihiin raashin ay ku noolaadaan.
Guddoomiye ku-xigeenka oo isagoo ku sugan magaalada Caynaba ee Xarunta gobolka Saraar khadka taleefanka ugu warramay wargayska Dawan, waxaa uu sheegay in ay laba kun oo qoys gobolka Saraan in ay raashin u qaybiyeen oo ay qoys kasta siiyeen 7 nooc oo ka mid ah raashin ah waxaanu intaa ku daray in ay gobolada Selel iyo Awdal in ay ka qaybiyeen raashin kan oo kale isla markaana ay raashin siiyeen toban kun oo qoys.
Guddoomiye Faysal oo ka hadlayay raashin kale oo ay gobolada galbeedka ku qaybiyeen,ayaa yidhi. “Goboladii duufaantu ku dhufatay ee gobolada Awdal, Selal iyo Saaxil waxaanu ku qaybinay raashin aanu siinay 10 kun oo qoys oo ah qoysayskii duufaantii gobolada galbeedka dalka ku dhufatay ay saamaysay isku mar ayaanan qaybinta ka bilawnay gobolada galbeed iyo bari, waana dedaal xukuumaddu ku quudinayso dadkeeda jilicsan meelkasta ha joogaane.”